Alahady faha dimy karemy – 13/03/2016 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Ary rehefa avy any amin’ny tanimbolin’I Oliva I Jesoa dia niakatra tany an-tempoly hivavaka. Ka I Jesoa tao an-tempoly no nisy zava-nitranga, vehivavy iray tratran’ny olona tany amin’olona iray nijangajanga, izany hoe nanitsakitsa-bady. Ka notaritarihan’ny olona inty vehivavy nentina teo amin’i Jesoa mba hotsaraina, inona no hitsarana inty vehivavy inty? Dia noho izy tratra nijangajanga, iza no miampanga azy? dia ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina, inona ny sazy araka ny lalàna ho an’ny olona tratra manao an’izany?, itantsika io ao amin’ny Deteranoma 22;22, dia manampy izany koa ny Levitika 20; 10. Voalaza ao fa izay olona rehetra tratra mijangajanga dia torahim-bato ho faty ka io fijangajangana izany dia tsy vehivavy irery ihany fa tsy maintsy misy lehilahy ao ka mitovy ny sazy mahazo ny lehilahy sy ny vehivavy, samy torahim-bato ho faty, izay no sazy miandry izay olona tratra amin’io fijangajangana io.
Rehefa nentina teo amin’i Jesoa izy nampangain’ireto Farisianina sy mpanora-dalàna nanao hoe: inty ry mpampianatra o! avy nijangajanga izy dia azy ihany no niteny ny sazy miandry azy nanao hoe: ary ny lalàn’i Moizy dia mandidy antsika hitora-bato ny olona toy izany. Fa ianao kosa mba ahoana? Ary tena marina nipetraka mihintsy ny voalazan’i Md Joany teny am-piandohana, fa i Jesoa no tiana halaina fanahy eto, ny fakam-panahy dia izao: raha ohatra ka tsy manameloka an’io vehivavy io i Jesoa dia mandika ny lalàn’i Moizy ary raha izany dia iharan’ny sazy koa i Jesoa. Ary raha toa indray i Jesoa manamaeloka hoe vonoy ary izy, torahy vato satria izay no voalazan’ny lalàna dia manohitra ny fampianarany izay miteny momba ny famindram-po hoe Andriamanitra dia mpamindra fo. Na i Jesoa manaiky fitoraham-bato araka ny lalàna na izy mandà dia tratra foana izy. Saingy nahodin’i Jesoa any amin’ny lafin-javatra hafa, niteny i Jesoa, tsy nijery ilay vehivavy izy fa nijery ilay mpiapanga: izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany dia niondrika i Jesoa nangina. Io fihetsika io dia tsara dinihantsika ihany, raha nentin’ny olona inty vehivavy tratra nijangajanga inty hoe inona no tokony atao dia tsy niteny i Jesoa fa nangina nanoratra tamin’ny tany tamin’ny ratsan-tanany.
Fa mbola ho avy ny fotoana anankiray amin’ny fitsarana an’i Jesoa nohelohina izy teo anatrehan’i Pilaty dia nangina izy. Dia ilay tantara teo, ilay vehivavy no nomelohina kanefa i Jesoa no tiana ho fandrihana fa nangina izy nanoratra tamin’ny tany tamin’ny ratsan-tanany, dia averimberina ihany inty fa misy manontany: inona no nosoratan’i Jesoa teo? Fa maninona izy no tsy niteny? Fa maninona izy no nanoratra tamin’ny tany? Dia misy miteny hoe ny nosoratany teo hono dia hoe: aiza ilay bandy, miala tsiny amin’ny fitenenana, satria mitovy ihany ny sazy mahazo ny lehilahy sy ny vehivavy izay tratra mijangajanga fa ilay vehivavy no voataritarika teo ho azon’ny fijangajangana. Fa ireo mbola misisika ihany manontany an’ i Jesoa. Ka izao no tsara ho fantatsika, ny lalàna izay tamin’i Moizy manameloka inty vehivavy inty dia voasoratra tamin’ny vato, ka raha vao zavatra voasoratra tamin’ny vato dia tsy azo kosehina fa maharitra eo. Fa ny an’ i Jesoa ny lalàna nosoratany tamin’ny tany, io dia famindram-po io, rehefa tsofin’ny rivotra io dia voafafa tsy misy intsony, maneho ny famindram-pon’Andriamanitra io.
Raha jerentsika koa ny tantara, kay ireto olona nanantona an’ i Jesoa mitondra ilay vehivavy hotoraham-bato izay nanodidina ilay vehivavy, izy ireo efa nivimbina vato ary miandry fotsiny hoe tanteraho ny lalàna dia maty ilay vehivavy satria efa nivonona ny amin’izany daholo ny olona. Dia mampahatsiaro antsika fa inty vehivavy inty dia karazan’ny olona efa maty ihany satria voahodidina olona maro be mitondra vato, izany hoe ny fasana hitantsika fa voarafitra amin’ny vato, toy ny efa anaty fasana izany ilay vehivavy noho ny fahotany sy ny fiampangana azy. Fa i Jesoa miaraka aminy voahodidina ao ka izay no nitenenan’ i Jesoa hoe izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany.
Fa rehefa niteny an’io i Jesoa dia samy nandini-tena ny tsirairay, tsy mbola nijery ilay vehivavy izy fa ireo mpiapanga no nojereny, rehefa avy eo niala tsirairay ny olona ka ny zokizokiny no nandeha voalohany satria kay izany arakaraky ny itomboan’ny taona no mampitombo ny fahotana ihany koa. Ny dikan’izay dia nisokatra ilay fasana noho ny tenin’ i Jesoa, teo i Jesoa vao nitraka nijery ilay vehivavy ka nanontany: ry vehivavy aiza ry zareo niampanaga anao teo? Moa tsy nisy nanameloka anao va? Namaly ilay vehivavy: tsy nisy tompoko. Nitsangan-ko velona ilay vehivavy noho ny tenin’ i Jesoa. Dia niteny i Jesoa: izaho koa tsy manameloka anao, mandehana ka aza manota intsony.
Raha amin’ny androntsika ankehitriny dia mbola mitohy ny nataon’ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna, izao ny lalàna dia avy vonona avy hatrany hitora-bato, manana endrika hafa ny fitoraham-bato amin’ny androntsika ankehitriny. Raha misy olona iray nanao ny tsy nety dia inona no fitoraham-bato ataontsika? Io nanao an’izao sy izao ary alefa mihintsy any amin’ny gazety sy ny haino aman-jery, izay ilay endrika fitoraham-bato ankehitriny ary misy voatora-bato noho ny fankahalana fotsiny fa tsy amin’ny zavatra mitombona, rehefa misy nanao ny tsy mety dia avy daholo hiteny an’iny sy hanaparitaka. Ary rehefa manao izany isika dia toy ny mihevitra ny tenantsika ho olo-marina, ary zava-mitranga amintsika io, mailaka ery rehefa mahita ny kileman’ny hafa. Raha jerentsika i Jesoa dia tsy nanam-pahotana. Ny olona rehetra nitondra ny lalàna sy nanambara ny zavatra rehetra mikasika inty vehivavy inty fa i Jesoa tsy nanam-pahotana no tsy nanameloka an’ilay vehivavy fa ny olona manam-pahotana mihevitra ny tenany ho marina niampanga ary vonona ny hamono.
Handinihantsika tena io amin’ny fiainana maha Kristianina antsika. Izaho koa tsy manameloka anao hoy i Jesoa, mandehana ary aza manota intsony. Isika dia samy mahita ny fahotana amin’ny hafa fa tsy mahita eo amin’ny tenantsika. Izay zavatra hitsarantsika ny hafa dia handinihantska tena aloha, raha miteny tsy maninona fa tsy mitsara kosa dia tsy ankasitrahan’Andriamanitra, tsy anjarantsika izany fa an’Andriamanitra satria na i Jesoa tsy manam-pahotana ary tsy nitsara. Dia izay ny hoe mila mandinika isika tsirairay avy.
Ny Evanjely androany vakiteny telo dia mampitodika antsika sahady any amin’ny Paka, ka ny Paka hitantsika androany dia i Jesoa nanangan-ko velona ilay vehivavy tratra nijangajanga, nanala azy tao anatin’ny fahafatesana, nampitsangana azy ho velona. Amaranana azy tantara kely iray mikasika ny tenin’ i Jesoa manao hoe aza manota intsony. Nisy lehilahy iray tena nahatsapa tena fa mpanota ary mba naniry ny lalan’ny fibebahana kanefa ao ilay mbola maha olombelona, isaky ny te hanao ny tsara hoy i Md Paoly dia ny ratsy foana no tonga misisika. Tsy hitany izay atao mba hialana amin’ny fahotana, dia nandray fanapahan-kevitra izy hoe isaky ny manao fahotana iray dia anongotany folo ny volony. Dia mandeha nisy ny fahotana ny maraina dia nanongotra folo, ny hariva nanongotra folo, nandritra ny herinandro vitsivitsy dia lasa sola ilay rangahy ka tsy nisy ongotana intsony satria tsapany fa nangadihady ny lohany ka nanontany tenan nanao hoe: inona ary izany no tokony hataoko? Nandeha izy ka nifanena tamin’ny olona iray izay tsy fantany akory ka nanome fanomezana tsara tarehy azy ilay olona ary nanjavona avy eo. Rehafa tonga tany an-trano izy nosokafany ilay fanomezana ary nanatena hahita zavatra be tao anatin’ilay fonosana, fa inona no tao? Rehefa nosokafany ilay izy dia soratra lehibe no hitany tao izay manao hoa: aza manota intsony. Dia io i Jesoa manangana antsika ho velona rehefa ao anatin’ny fahotana isika.